MODA | Article Detail | ၂၀၁၆ ရဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေး လက်သည်းဒီဇိုင်းသစ်များ
၂၀၁၆ ရဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေး လက်သည်းဒီဇိုင်းသစ်များ
၂၀၁၆ ရဲ့ လေးလမြောက်ရာသီထဲကို ဝင်လာခါစဆိုပေမယ့် MODA က အလှအပချစ်သူများအတွက် နောက်ကျန်ရှိနေသော ၈ လစာအတွက် ခေတ်စားမယ့် အလှအပတွေကို ခန့်မှန်းပေးချင်ပါတယ်။ လက်သည်းဖက်ရှင်အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက မဂ္ဂဇင်းတွေထက် ပိုမြန်တဲ့ အကြောင်းကြားမှုရှိပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ကျော်ကြားစပြုနေတဲ့ လက်သည်းဖက်ရှင်တွေကို ခုဒီမှာ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း စုစည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ ခေတ်စားလာတဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေးနည်းသစ်တွေ၊ အလှဖော်နည်းသစ်တွေက ကျန်ရှိတဲ့ ၂၀၁၆ လတွေအတွက် ရာသီစာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူပြောရလဲ???
ဈေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ Hand Gel နဲ့ Mask တွေကို ထုတ်လုပ်လှုဒါန်းခဲ့တဲ့ "Bye Bish"
Covid 19 ကြောင့် လက်သန့်ဆေးနဲ့ Mask တွေက နေရာတိုင်းမှာ ပစ္စည်းရှာမရအောင် ပြတ်ထွက်သွားတာ အားလုံးအသိပါ။ အချိူ့ အမှန်တကယ် ကာကွယ်ဘေးကင်းချင်လို့ ဝယ်ယူတာရှိသလို အမြတ်ကြီးစားနဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတာကြောင့် အများပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာ အားလုံးကြုံတွေ့နေရမှာပါ။
ဒီလိုပြဿနာတွေအတွက် နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီး Fashion နဲ့ Beauty Brand တော်တော်များများက လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေ ဆိုင်းငံ့ထားပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ Hand Gel နဲ့ Mask တွေကို ကိုယ်တိုင်ထုပ်လုပ်ပြီး အခမဲ့ လှုဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ထူးထူးခြားခြား Beauty Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bye Bish ကလည်း Covid 19 ကြောင့် လတ်တလောဝယ်လိုအားမြှင့်နေတဲ့ Hand Gel, Mask နဲ့ Antibacterial Soap တွေကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီး လှုဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားက နယ်မြို့ဆေးရုံတွေနဲ့ သီလရှင်ကျောင်းတွေကို ခွဲဝေလှုဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကာလတန်ဖိုး ၁၈သိန်းကျော်လှုဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ ကပ်ရောဂါအတွက် လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကို လှုဒါန်းမှုပြုလုပ်ပေးတာက အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိ၊ မွန်မြတ်လှတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ Stretch Mark ရှိတာကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဘယ်လိုလက်ခံမလဲ
Stretch Mark ပိုင်ဆိုင်ထားတာက ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများ အကြောပြတ်ရဆို မနှစ်သက်တဲ့သူများပါတယ်။ အကြောပြတ်ရာကြောင့် ရှက်ပြီး အတိုအပြတ်တောင် မဝတ်နိုင်တဲ့ထိ ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ မပြည့်စုံတာ၊ အလိုမကျတာဆိုတာကလည်း ရှိစမြဲမို့ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အရာကိုလည်း လက်ခံဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ရှင်သွင်ပြင်၊ အဝတ်အစားစတဲ့ အပေါ်ယံတွေကိုသာ ဦးစားပေးစဉ်းစားကြပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ရဖို့၊ လူတွေစံထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှအပရဖို့ အမျိူးမျိုးကြိုးစားကြတယ်၊ ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ကြတယ်။ ဒါတွေက တကယ်တမ်းတော့ အလွဲကြီး တစ်ခုပါ။ လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ကျွန်မတို့တွေ ပြောင်းလဲပုံဖော်နေတာက ပျော်ရွှင်မှု အစစ်အမှန်မဟုတ်သလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ Identity ပါ ပျောက်ဆုံးစေပါတယ်။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝိတ်အတက်အကျရှိတဲ့သူမို့ ပေါင်နားတစ်ဝိုက်မှာ အကြောပြတ်ရာတွေက မနည်းမနှောပါ။ မင်းသမီးတွေ၊ မော်ဒယ်တွေကိုကြည့်ရင်း ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးတာကလည်း ခဏ၊ ခဏပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတာက ဒီအရာတွေအပေါ် Apprecitate လုပ်ဖို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီလို စဉ်းစားနေထိုင်ပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာသလို၊ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်လာတယ်၊ အရာရာကို အကောင်းမြင်လက်ခံနိုင်လာပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရာတွေကို လက်ခံပြီး အလှပဆုံးနေထိုင်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေအားလုံးကိုလည်း ဒီနေရာကနေ Cheers ပါနော်။ ကဲ Stretch Mark ရှိတာတော့ဟုတ်ပါပြီ၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသင့်လဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ အဆုံးထိဖတ်ကြည့်နော်။
အကြောပြတ်ရာရှိတယ်ဆိုတာက ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ပုံဖော်နိုင်ခဲ့သူအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲဖြစ်တာ၊ အားကစားလုပ်တာ၊ ခနွာကိုယ်အတက်အကျဖြစ်တာနဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောပြတ်ရာတွေက ဘဝရဲ့ အမှတ်ရစရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ Stretch Mark တွေက ပျိုမေတို့နဲ့အတူ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေမှာပါ။ အချို့ လက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒါကို နည်းအမျိူးမျိူးနဲ့ ဖျောက်ပစ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်။ ဒါက Personal Right မို့ အဆင်ပြေသလို ဆုံးဖြတ်ပါနော်။
ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံပြီးရင်တော့ ပိုပြီး သန်မာရင့်ကျက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တည်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မှာပါ။ ဘဝရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု၊ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီး သန်စွမ်းကျန်းမာတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လှနေမှာပါ။
အမျိူးသမီးတွေအတွက် ရှေးအရင်ကတည်းက အလှအပစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေက များပြားလွန်ကဲလွန်းလှပါတယ်။ ဘာဘီအရုပ်မလေးလို ခန္ဓာကိုယ် ရှိနေစရာမလိုသလို၊ ဂရိနတ်ဘုရားမရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်မျိူးလည်းရှိနေဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်အရှိအတိုင်းလက်ခံရမှာဖြစ်သလို ဒီစံနှုန်းတွေကြောင့် စိတ်အားငယ်တာ၊ ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ကွယ်တာကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရမှာပါ။ အကြောပြတ်ရာတွေက ကိုယ့်ဘဝရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တာမို့ ဒါကို Embrace လုပ်ကြည့်ပါ။
အကြောပြတ်ရာတွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကိုကော သိထားလား။ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အကြောပြတ်ရာနဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ဟာတွေနဲ့ တစ်ထေရာတည်း မတူဘူးဆိုတာပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ လက်ဗွေရာမတူသလိုပဲ Stretch Mark တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကလည်း ကွဲပြားတာမို့ အကြောပြတ်ရာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိူးသမီးတွေက Unique ဖြစ်လွန်းတာက ငြင်းလို့မရပါဘူး။
Boohoo၊ ASOS တို့လို Brand တွေတောင်မှ Stretch Mark ရှိတဲ့ မော်ဒယ်တွေသုံးပြီး ကြောငြာခဲ့ပါသေးတယ်။ အမျိူးသမီးတိုင်းလိုလိုမှာရှိနေတဲ့ ဒီ အကြောပြတ်ရာလေးက အားလုံးကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေပါတယ်။ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရတာမလို၊ လိုတာမရတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတာမရှိသလို စိတ်ဓာတ်သန်စွမ်းကောင်းမွန်တဲ့ အမျိုးသမီးကသာ အလှဆုံးဆိုတာကိုလည်း လက်တို့ချင်ပါတယ်။ ကိုယ်မှာပဲ အကြောပြတ်ရာတာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ သွယ်လှတဲ့မိန်းကလေး၊ ပြည့်ဖြိူးတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာရှိသလို ကလေးမွေးထားတဲ့မိခင်နဲ့ အပျိူဖြန်းလေးတွေဆီမှာလည်း ရှိတာမို့ အမျိုးသမီးတိုင်းက လှပပါတယ်၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဒီလိုအရာတွေကိုလက်ခံပါလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်။
အိမ်ထဲမှာနေရင်း Beauty Spa မှာရောက်နေသလို ခံစားရမယ့် Treatment များ
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Cornovirus ကြောင့် ကျန်းမာရေးဌာနတွေက ရောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက် တတ်နိုင်သမျှအိမ်ထဲမှာပဲနေခိုင်းနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆိုင်တွေ၊ Public Area တော်တော်များများလည်း ပိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အနားယူအပန်းဖြေနိုင်မယ့်နေရာဆိုတာလည်း မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဇိမ်ယူချင်တဲ့စိတ်ကလည်း အတော့်ကိုဆိုးပါတယ်။ relax လုပ်ဖို့အတွက် Spa တွေကလည်း သွားဖို့မသင့်သလို၊ ပိတ်နေကျပြီလည်းဖြစ်တော့ ကိုယ် ပုံမှန် Spa မှာ အပန်းဖြေသလို အိမ်မှာလည်း Spa Treatment ယူကြရအောင်။ အိမ်ထဲမှာ အချိန်ဖြုန်းရမယ့်အတူတူ Relax ကောင်းကောင်းလုပ်ပစ်လိုက်ပါ။
Bathtub ထဲမှာ အချိန်ပေးပြီး စိမ်ပြေနပြေ ရေစိမ်ခဲ့တဲ့အချိန်က ဘယ်အချိန်နောက်ဆုံးလဲ။ အလုပ်တွေမအားလပ်နိုင်၊ ကောင်းကောင်းမနားရတာတွေကို အတိုးကျပြီး အခုအချိန်မှာအနားယူလိုက်ပါ။ ရေနွေးနွေးလေးထဲ ဆားလေးထည့်ပြီး ဝိုင်တစ်ခွက်နဲ့ မိနစ်နှစ်ဆယ်၊ သုံးဆယ်စိမ်လိုက်ပါ။ ကြွက်သားရောင်ရမ်းတင်းမာတာတွေသက်သာစေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ခြေဗလာနဲ့ တစ်နေကုန်အိမ်ထဲ လျှောက်သွားနေရတော့မှာဆိုတော့ ခြေထောက်အတွက်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ရမှာပါ။ နူးနူးညံ့ညံ့၊ လှလှပပခြေထောက်အတွက် Exfoliate လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့ Nail Polish တွေနဲ့ Youtube က DIY Nail Art တွေကြည့်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်လုပ်နိုင်တယ်နော်။
ပုံမှန် Spa တွေမှာ သွားလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကိုလည်း Try ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Face Roller တစ်ချောင်းရှိရုံနဲ့ စိမ်ပြေနှပြေ Skin ကို massage လုပ်လို့ရပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။
ပုံမှန်နေ့တွေမှာ အလုပ်ကပြန်လာ၊ မိတ်ကပ်တွေကိုမြန်မြန်ဖျက်ပြီး အခြား Skincare တွေလုပ်ရင်လုပ်၊ မဟုတ်ရင် တန်းအိပ်လိုက်ကြတာ မိန်းကလေးတိုင်းနီးပါးပါ။ ကဲဒီအချိန်မှာတော့ အသားအရေအတွက် ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းရတဲ့ Peeling Time ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ Peeling လုပ်ပြီး နေပူထဲလည်း ထွက်တာကို ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အပြင်မထွက်ရမယ့်တူတူ အိမ်ထဲမှာပဲ Peeling လေးလုပ်၊ Moisturizer လေးလိမ်းပြီး အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းရုံပေါ့။
အများအားဖြင့် အချိန်ယူပြီး တကူးတကလုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေက အကျိူးရှိလေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ မနက်အစောကြီးထစရာမလိုတဲ့ နံနက်ခင်းတွေအတွက် Hair Mask လေးတွေ ရှိနေပါတယ်နော်။ Hair Mask လုပ်နည်းကို သေချာကြည့်ပြီး ညထဲက စနစ်တကျပေါင်းတင်ထားပါ။ မနက်ထလာရင်လည်း ခေါင်းကို သေချာလျှော်၊ Hair Oil လေးလိမ်းပြီး ကြည့်မဝဖြစ်နေမယ့် ဆံသားအလှကို တွေ့ရမှာပါ။
#homemade beauty treatments
Review ကောင်းပြီး Top Seller ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ထုတ် သဘာ၀ Body Scrub Brand များ
အသားအရေကြည်ကြည်လင်လင်လေးဖြစ်စေဖို့ Body Lotion တစ်ခုတည်းကိုပဲ အားကိုးလို့မရပါဘူး။ ပြင်ပက အညစ်အကြေးတွေက မွှေးညှင်း ချွေးပေါက်တွေမှာ ကပ်ညှိနေတဲ့အတွက် အတွင်းထဲထိ သန့်စင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်မတို့တွေက Facial ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဓိကထားပြီး Care လုပ်ပေမယ့် အခြား Body အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတော့ သာမန်ကာလျှံကာ Lotion လေးလူးရုံလောက်နဲ့ ရပ်လိုက်ပါတယ်။ Body Lotion တောင်မှ ရေချိုးပြီး သတိရတဲ့အချိန်လောက်သာ ကောက်ကာငင်ကာ ထလိမ်းကြတာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်ခါ မျက်နှာက တစ်ရောင်၊ လက်တွေခြေတွေက တစ်ရောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မျက်နှာအတွက် ဂရုစိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ ပုံမှန်နေလောင်ညစ်ညမ်းနေတဲ့ Body ပိုင်းအတွက်ကော Care မလုပ်တော့ဘူးလား။ တစ်ပတ် တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ပတ်နှစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ် Scrub ကိုပုံမှန်လုပ်သင့်ပါတယ်။ Scrub လုပ်တာက ဘာတွေကောင်းလဲ၊ အသားအရေမွဲခြောက်သွားစေမလားစတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် ပုံမှန် Scrub လုပ်တာက အသားအရေကိုကြည်လင်စေတယ်။ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်၊ စိုပြေဝင်းလက်တဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေတယ်၊ Body Lotion ကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်း ပိုမိုကောင်းပြီး မြန်ဆန်သိသာတဲ့ရလဒ်ကိုရစေတယ်၊ ချွေးနဲ့ အခြားအနံ့အသက်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှ Scrub ပုံမှန်လုပ်တာက အနံ့အသက်ကင်းစေပြီး Fresh ဖြစ်စေပါတယ်။ Product ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်း Chemical မပါတဲ့ သဘာ၀ Scrub တွေကိုသာ အဓိကထားပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ သဘာ၀ Product တွေကို တပိုင်တနိုင်ထုတ်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ Review ကောင်းပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ Scrub Brand လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Facebook Page တွေကို တကူးတကကြည့်စရာမလိုအောင် Title လေးတွေမှာ Link လေးတွေထည့်ပေးထားတာမို့ Click ကြည့်လို့ရတယ်နော်။
ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေးထုတ်တဲ့ နာမည်ရ Brand လေးတစ်ခုပါ။ Baking Soda, Coffee, Honey နဲ့ Green Tea ဆိုပြီး Scrub အမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Green Tea လေးက Editor အကြိုက်ပါ။ Dead cell တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး Matcha Green Tea နံ့လေးက စိတ်ကို Fresh ဖြစ်စေမှာပါ။ Body Gloss လေးလည်းရှိတာမို့ သုံးကြည့်ဖို့ Recommand ပေးချင်ပါတယ်။ အညွှန်းလေးကလည်း သူများနဲ့မတူပဲ ထူးထူးခြားခြားမို့ သဘောကျစရာပါ။
Kelly's Home က Coffee Scrub က နာမည်ကြီးပြီး New Product ဖြစ်တဲ့ Bleaching Mask ကလည်း အမြဲရောင်းရတဲ့ Product လေးပါ။ ပစ္စည်းအရောင်း တင်လိုက်တိုင်း ကုန်ကုန်သွားတက်လို့ အမြန်လက်သွက်သွက်နဲ့ မှာမှရမှာပါ။ Lip Scrub နဲ့ Body Butter တွေလည်း ထုတ်ထားပါတယ်။ Shea Soft Body Butter က 100% Natural ဖြစ်ပြီး အသားအရေကို တကယ်နူးညံ့စိုပြေစေတာမို့ Scrub လုပ်ပြီး တစ်ခါတည်းလိမ်းလိုက်ရုံပေါ့။
Self Love ရဲ့ Body Scrub တွေကလည်း လူသုံးများပါတယ်။ လူကြိုက်များပြီး အရမ်းရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေပါသုံးပြီး သဘောကျတဲ့ Gentle Monster လေးကိုညွှန်းချင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကနေထွက်တဲ့ ကင်ပွန်းသီးမှုန့်၊ သနပ်ခါး သစ်ဂျပိုးခေါက်နဲ့ ပျားရည်တို့နဲ့ သဘာဝအတိုင်းဖော်စပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကော၊ Body အတွက်ပါ စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
The Mix by Su
The Mix by Su က Scrub လေးတွေကတော့ Editor လတ်တလောသဘောကျနေတဲ့ Product လေးတွေပါ။ Baking Soda, Coffee, Turmeric & Ginger နဲ့ Cotton Candy ဆိုပြီး Scrub လေးမျိုးရနိုင်မှာပါ။ Baking Soda Scrub လေးကတော့ Editor ရဲ့ Favourite Item လေးတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ တံတောင်ဆစ်၊ ဒူးဆစ်နဲ့ Bikini Line နေရာတွေပါ ဖြုဝင်းစေတဲ့အထိစွမ်းပါတယ်။ Skin Harmony Facial Scrub လေးကလည်း Review တွေအရမ်းကောင်းလွန်းလို့ Try ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Scrub House က Lavender Oatmeal လေးကလည်း စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ရလဒ်ကိုပေးမှာပါ။ ပုံမှန်သုံးတယ်ဆိုရင် Healthy & Glow Skin Effect ကိုရစေတဲ့ထိ ကောင်းပါတယ်။ အသားခြောက်တဲ့သူနဲ့ Sensitive Skin တွေပါသုံးလို့ရပြီး ဈေးနှုန်းလေးကလည်း အသင့်အတင့်ပဲရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် သုံးလို့အရမ်းကောင်းတဲ့ Lip Scrub နဲ့ Lip Balm ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရနိုင်တဲ့ “Strawberry Bomb” Lip Care Series လေးလည်းရှိပါတယ်။
Narnar's Scrub & More
Narnar ရဲ့ Scrub လေးတွေကလည်း လူသုံးများတဲ့ Product လေးတွေပါ။ အမျိုးအစားအနေနဲ့ သုံးမျိုးရွေးချယ်လို့ရနိုင်မှာပါ။ ဘာတွေလဲဆိုတော့ Cinnamon Cookie Scrub, Giant Espresso Scrub နဲ့ Lemon Green Tea Scrub ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခြား Scrub တွေနဲ့ မတူတဲ့ နာမည်နဲ့ Ingredient တွေပါဝင်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ Editor ကတော့ Lemon Green Tea Scrub လေးကို သဘောကျပါတယ်။ Skin Detox လုပ်ပေးပြီး Antibacterial အာနိသင်ပါဝင်တဲ့အတွက် Healthy Skin ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့သူတိုင်းအတွက် သင့်တော်မှာပါ။
#best body scrub for glowing skin
#best body scrubs for lightening skin
#coffee body scrub
#green tea body scrub
NIVEA က အသစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ NIVEA Floral Whitening Collection
NIVEA မှ NIVEA Extra Whitening Roll-on နဲ့ အတူ အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ NIVEA Floral Whitening Collection ကို ကြယ်ပွင့်များစီခြယ်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ Le Planteue Restaurant & Lounge မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
NIVEA Floral Whitening ကို နောက်ဆုံးပေါ်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပန်းရနံ့ ၃မျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ သုံးမျိူးကတော့ မွှေးပျံ့တဲ့နှင်းဆီရနံ့ကို စွဲမက်သူတွေအတွက် NIVEA Hokkaido Rose Whitening၊ သင်းပျံ့တဲ့ချယ်ရီဝတ်ဆံလေးတွေရဲ့ ရနံ့ကို ချစ်တဲ့ပျိုမေတို့အတွက် NIVEA Sakura Whitening နဲ့ လန်းဆန်း‌‌တဲ့လီလီပန်းလေးတွေရဲ့ ရနံ့ဆန်းလေးကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် NIVEA Lily Whitening ဆိုပြီး ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ချိုင်းကြားအသားအရေကို ထိရောက်စွာဖြူဝင်းစေမည့် Pure ဗီတာမင်စီရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ ချိုင်းချွေးနံ့ဆိုးကို ၄၈ နာရီကြာ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စန္ဒာအောင်ကလည်း ပန်းရနံ့ Roll-on တွေကို စိတ်ကူး စိတ်သန်းကောင်ကောင်းနဲ့ ကျော့ရှင်းလှပသည့် ဝတ်စုံတွေအဖြစ် ဖန်တီပုံဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝအလှတရားနဲ့ ယုံကြည်မှုရှိခြင်းတွေကို ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဒီဝတ်စုံလေးတွေကို M Seng Lu၊ မြတ်နိုးအေး၊ ဒီးနဲ့ မေဂရေ့ပယ်ရီ တို့က ဝတ်ဆင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Fashion Show နဲ့ အခြား ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တွေက NIVEA ကနေ အသစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Floral Whitening Collection ကို လှပသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲကို ကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က NIVEA က ချိုုင်းကြားအသားအရေကို ညီညာတောက်ပစေကာ ချွေးနံ့ဆိုးများကို ရှည်ကြာစွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုနဲ့အတူ ချိုင်းကြားအသားအရေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်း အလှတရားကို ထုတ်ဖော်ပြသရန် ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ချိုင်းကြားအသားအရေကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အင်္ကျ ီကို လက်နဲ့သာ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ချိုင်းကြားနေရာရှိ အသားအရေမဲခြင်း သို့မဟုတ် မညီမညာဖြစ်ခြင်းနှင့် အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းတို့ကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက် NIVEA က နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ သုတေသီများရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖွဲ့နဲ့ ဒီဇိုင်းဆွဲ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
#NIVEA Floral Whitening Collection
သင့်ရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့လေး သင်းပျံ့နေအောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Home made နည်းလမ်းလေးတွေ
ကိုယ်သင်းရနံ့ဆိုတာ ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်ရဲ့ကိုယ်သင်းရနံ့လေး သင်းပျံ့နေအောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Home made နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပါ။ ကိုယ်သင်းရနံ့မွှေးပျံ့နေဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရပါမယ်။ တော်တော်များများကတော့ တစ်နေ့ကို ရေတစ်ကြိမ်ပဲ ချိုးတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင်က အားကစားပုံမှန်လုပ်တတ်သူ ဒါမှမဟုတ် ပူတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတတ်သူဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို ၂ကြိမ်လောက်ပုံမှန်ရေချိုးပေးပါ။ ရေချိုးတဲ့အခါ ဆပ်ပြာကို ပုံမှန်တိုက်ပေးခြင်းက သင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကပ်နေတဲ့ bacteria နဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကင်းစင်စေမှာပါ။ ၂ရက်ခြားတစ်ကြိမ်ခေါင်းလျှော်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Dry Shampoo ကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး ( Roll-on ) သုံးပေးပါ။ Roll-on သုံးတဲ့အခါမှာလဲ အနံ့ပြင်းပြင်းတွေကို မသုံးပါနဲ့။ အနံ့ သင်းသင်းလေးတွေကသာ သင့်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမှာပါ။
အနံ့အသက်ကောင်းကောင်းနဲ့ လျှော်ဖွတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။ အဝတ်အစားတွေကို မလျှော်ဘဲ ပြန်လည်ဝတ်ဆင်တာက မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အဝတ်ဗီဒိုထဲကို ပရုပ်လုံး ဒါမှမဟုတ် ဗီဒိုထဲ ထည့်တဲ့အမွှေးအိတ်လေးတွေ ထည့်ထားပေးပါ။ အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် အနံ့အသက်ကောင်းပြီး သန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ခြင်းကလည်း သင့်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိစေပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ စကားပြောတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ခံတွင်းနံ့သင်းနေစေဖို့ပါပဲ။ ရေများများသောက်ပေးပါ။ အစားစားပြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အထူးသဖြင့် အစားအသောက်ထဲမှာ ကြက်သွန်ဖြူကဲ့သို့သော အနံ့ပြင်းတဲ့အရာမျိုးပါလာခဲ့ရင် ခံတွင်းကို မဖြစ်မနေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ သင့်အိတ်ထဲမှာ ခံတွင်းသန့်ဆေးရည် ဒါမှမဟုတ် အိတ်ဆောင်သွားတိုက်တံနဲ့ သွားတိုက်ဆေးကို အမြဲဆောင်ထားပါ။ ဝမ်းမချုပ်ပါစေနဲ့။
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ သင့်ရဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်းလေး ဆွတ်ကြရအောင်နော်။ ရေမွှေးဆွတ်တဲ့အခါမှာလည်း ရေမွှေးနံ့တာရှည်ခံဖို့အတွက် လက်ကောက်ဝတ်၊ လည်ပင်းနေရာတွေကို ဆွတ်ပေးပါ။ ရေမွှေးသုံးတဲ့အခါမှာလဲ အနံ့ပြင်းပြင်းတွေထက် ချိုချဉ်နံ့၊ လာဗင်ဒါပန်းနံ့ သင်းသင်းလေးရှိတဲ့ ရေမွှေးကိုသုံးပေးခြင်းက သင့်ကို အထက်တန်းကျကျစမတ်ကျစေမှာပါ။
ကဲဒီလောက်ဆိုရင် တစ်နေကုန်ကိုယ်သင်းနံ့လေးမွှေးပျံ့စေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီမို့ ပျိုမေတို့လဲ ဒီနည်းလေးအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
BIKINI LINE WAXING နဲ့သိထားသင့်တာလေးတွေ
ခန္တာကိုယ်ပေါ်မှာအမွှေးအမျှင်လေးတွေနေရာစုံမှာရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်မလိုအပ်တဲ့အမွှေးတွေကိုတော့ဖယ်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ဖယ်ရှားပုံနည်းလမ်းမျိုးစုံရှိကြပါတယ်။နှုတ်တာ ၊ ရိတ်တာ တို့အပြင် Waxing ဆိုတဲ့အမွှေးကိုချွတ်တဲ့အခါဖယောင်း( သို့ ) ပျားဖယောင်းကိုသုံးပြီး
အမွှေးချွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်တာက ကရိကထများစေပြီး (Shaving ) ရိတ် တာကလည်း အမွှေးတွေကိုအမြစ်ကနေမပါသွားတဲ့အတွက် အချိန်တိုအတွင်းပြန်ပေါက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ waxing လုပ်နည်းလေးပါဘဲ။
waxing လုပ်တယ်ဆိုတာကခန္တာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့အမွှေးအမျှင်လေးတွေကို အမြစ်ကနေခေတ္တခဏဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အတွက်အမွှေးပြန်ပေါက်တဲ့အချိန်ကာလ ၄ပတ် ကနေ ၆ပတ်အတွင်းကြာပါတယ်။တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအမွှေးပြန်ပေါက်တဲ့အချိန်တော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
အရင်ကဆိုရင်အမွှေးအမျှင်ဖယ်ရှားလေ့ရှိတဲ့နေရာသိပ်မများတတ်ကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းအလှအပရေးရာကိုပိုပြီးဂရုစိုက်လာကြတဲ့နောက် waxing လုပ်ခြင်းကိုပိုပြီးအသေးစိပ်ဂရုစိုက်လာကြပါတယ်။Wax လုပ်တဲ့အမျိုးအစားလေးတွေက Soft wax , hard wax ,fruit wax , sugar wax ,chocolate wax ဆိုပြီးခွဲထားပါတယ်။soft wax (strip waxing )ကဆိုရင် အပျော့စား Waxing လုပ်နည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်လို့လည်းရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပြီး စက္ကူ ၊ အဝတ်စစတာတွေကိုသုံးပြီးအမွှေးပေါက်တဲ့လားရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကနေဆွဲခွာလိုက်တဲ့အခါအမွှေးတွေပါသွားတဲ့အမွှေးချွတ်နည်းလေးပါ။ အဲ့တာကတော့အမွှေးရောအရေပြားကိုပါဆွဲပါစေတာမို့ပိုပြီးနာကျင်ပါတယ်။hard wax ကတော့စက္ကူတွေစာရွက်တွေမလိုဘဲ wax လုပ်မယ့်ဖယောင်းကို အရမ်းမပူစေဘဲနွေးနွေးလေးကို ထူထူလေးတင်ပြီး
အေးသွားတဲ့အခါမာသွားတဲ့ဖယောင်းကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားလိုက်ရင်အမွှေးတွေပါသွားပြီ။တစ်ချို့ ခြေသလုံးမွှေးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေအမွှေးအမျှင်ထူတဲ့သူတွေ နောက်ပြီးတိကျပြတ်သားတဲ့ hair removeလုပ်ချင်သူတွေကတော့ hard waxing နည်းနဲ့ hair remove လုပ်လာကြပါတယ်။hard wax ကိုupper lips ,underarms ,bikini area တို့လိုနူးညံ့တဲ့နေရာတွေအတွက်သုံးပါတယ်။အခုဆိုTrendy ဖြစ်လာတာကတော့ bikini line ကို waxing လုပ်ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ပွင့်လင်းမြင်သာလာ
တာနဲ့အမျှကမ်းခြေသွားတဲ့အခါ ရေကူးကန်လိုနေရာ စတဲ့နေရာတွေအတွက်ရေကူးဝတ်စုံဝတ်တဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ်နေတဲ့အသားတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှပနေဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတွက်သိသင့်တယ်ထင်တာလေးတွေကိုမျှဝေပေးမယ်နော်။
၁.သင့် bikini line wax လုပ်မယ့် နေရာကအမွှေးကိုအချိန် ၄ပတ်ဘာမှမလုပ်ဘဲရှည်ခွင့်ပေးထားရပါမယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့တိုနေတဲ့အမွှေးအမျှင်လေးတွေက wax လုပ်ရခက်လို့ပါ။
၂.နာကျင်မှုကိုသက်သာစေဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုခု စဉ်းစားထားရပါမယ်။တချို့ကတော့အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး လိုအရာတွေကိုကြိုသောက်တတ်ကြပါတယ်။မသောက်ချင်ရင်တော့waxမလုပ်ခင်ဒေါသထွက်နေရင်တော့အဲဒီဒေါသက သင့်နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေမယ်ထင်ပါတယ်။
၃.နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ bikini line waxing ကို အမျိုးသမီးဓမ္မတာမလာခင် ၅ရက်အလိုနဲ့လာပြီး ၅ ရက်အထိ မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။အဲဒီအချိန်တွေကနာကျင်မှုပိုစေပြီးအထိခိုက်မခံတဲ့ကာလာမို့သတိထားပြီးရှောင်ပေးသင့်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်း waxing မတိုင်ခင် work out လုပ်ပေးသင့်ပြီး waxing လုပ်ပြီးမှ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
၄.နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကမ်းခြေသွားခါနီးရက်ကပ်ပြီးမှ waxing မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ waxing လုပ်ခြင်းကအလွယ်တကူမြန်မြန်ပြန်ပေါက်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် အနည်းဆုံး ၃ရက်လောက်တော့ခွာပေးပါ။ဒါမှသာ waxing လုပ်ပြီးချွေးပေါက်ကျယ်နေတဲ့သင့်အသားအရည်ကိုပင်
လယ်ရေ ဆားငံရေက မယားယံစေမှာပါ။
၅.ဘယ်လိုပုံစံအနေအထား Wax လုပ်မှာလည်းဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ bikini line waxingဆိုရင် Brazilian Waxing type ကိုအလုပ်များပြီး များသောအားဖြင့်triangle shape လေးထားချန်ထားပြီးbikini line ဆင်းတဲ့တစ်လျှောက်ကို wax လုပ်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့အကုန်အပြောင် အရှေ့ရောအနောက်ပါ Waxing လုပ်ကြပြီး String ,Martini ,Heart ,Diamond ဆိုပြီး shape တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲတော့ကိုယ်ကဘယ်လိုအနေအထားဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလည်းဆိုတာကြိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၆. NotaSuit and Pantyhose လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင် waxing သွားလုပ်တဲ့အခါဝတ်သွားတဲ့ Outfitကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ပေါ့ပါးပြီး ဝတ်ရ ချွတ်ရလွယ်တဲ့ outfit မှသာအဆင်ပြေမှာပါ။
၇.waxing လုပ်ပြီးပြီးချင်းက နာကျင်တာရော နူးညံ့ပြီး အထိခိုက်လွယ်စေတာမို့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုunderwear မဝတ်သင့်ပါဘူးနော်။
၈.နောက်တစ်ခုအနေနဲ့waxing saloon တွေကသန့်ရှင်းဖို့အရေးကြီးသလို ကိုယ့်ကိုအသုံးပြုပေးမယ်အရာတွေက တစ်ခါသုံးမဟုတ်ဘဲအထပ်ထပ်အခါခါသုံးထား ပြီးသားဆိုရင်တော့အဲဒီဆိုင်ကနေချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ပါ။
ဒါတွေကတော့ bikini line waxing လုပ်တဲ့အခါကြိုတင်သိထားတွေးထားသင့်တဲ့အရာလေးတွေပါ။ဒီတော့ရေကူးဝတ်စုံဝတ်တဲ့အခါယုံကြည်မှုရှိရှိလှနေဖို့waxing လေးတော့လုပ်သင့်တာမို့အခုပြောတဲ့အရာလေးတွေကသင့် waxing time အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် ကျောရိုးအလှကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေမယ့် TATTOO များ
ခပ်မိုက်မိုက် Tattoo လေးတွေထိုးကြည့်ရအောင်။
by Hnin Ei Ei Hlaing
တက်တိုးထိုးတာကို အရင်ခေတ်အခါကဆိုရင် လူကြီးတွေကအစ မကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ တက်တူးထိုးရင် လူဆိုး၊ မကောင်းတဲ့သူလို့ ထင်ကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ခေတ်ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တက်တူးတာကို အဆန်းတစ်ခုအနေနဲ့ မသတ်မှတ်ကြတော့ဘူး။ အရင်ကဆို တက်တူးထိုးတယ်ဆိုတာ ယောက်ျားလေးတွေပဲ ထိုးလေ့ရှိသော်လည်း အခုချိန်မှာတော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်း Fancy Tattoo လေးတွေကို လက်ကောက်ဝတ်၊ လည်ပင်း၊ ခြေကျင်းဝတ်တို့မှာ အထိုးများလာကြပါတယ်။ တချို့ကောင်မလေးတွေကျ Permanent မထိုးချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်း Temporary Tattoo လေးတွေ ထိုးလို့ရပါတယ်။ တက်တူးထိုးဖို့ နေရာရွေးတဲ့ အခါသူများတွေနဲ့ မတူဘဲ နည်းနည်းဆန်းတဲ့ နေရာလေးတွေကို ထိုးစေချင်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပေါ်လွင်စေမယ့် ကျောရိုးကို ထိုးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကျောရိုးမှာ တက်တူးထိုးတယ်ဆိုတာ ရှားတော့ရှားပေမယ့် ထိုးကြည့်မယ်ဆို ကျောရိုးအလှကိုပါပေါ်လွင်စေမှာပါ။ အခုဆို မိန်းကလေးတော်တော်များများလည်း ကျောပြောင်လေးတွေ ဝတ်လေ့ရှိတော့ ဒီလို ကျောရိုးတက်တူးနဲ့ ကွက်တိပါပဲ။ ကျောရိုးပေါ်မှာ တက်တူးထိုးတဲ့အခါ ဘယ်လိုပုံစံအနေအထား၊ လှရောလှလားဆိုတာကို ပုံလေးတွေဖော်ပြပေးမှာမလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
ခေတ်တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း ရိုးမသွားမယ့် NAIL COLOR ၆ မျိုး
Simple & Chic ဖြစ်နေမယ့် အရောင်တွေပါ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ Nail Art Idea တွေအမျိုးမျိုးခေတ်စားနေပြီး လူငယ်တွေ အလေးပေးပြင်ဆင်လာကြပေမယ့် အမြဲလုပ်ဖို့ကလည်း မအားလပ်တဲ့အချိန်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ လက်သည်းအတွက် တကူးတက ပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲ အိမ်မှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို သိထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ trend တွေဘာတွေ ခဏထားပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အမြဲဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရောင်တွေကို ပျိူမေတို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။